တစ်ပတ် 19 ဖီဖာအဖွဲ့: ကစားသမားများ၏ဖွဲ့စည်းမှု၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
တစ်ပတ် XX ဖီဖာ 19 အဖွဲ့များ၏ဖွဲ့စည်းမှု
EA ၏ကုမ္ပဏီသင်္ကေတအဖွဲ့နှင့်မြှင့်တင်ရန် Ultimate Team ကဒ်စစ်အစိုးရအတွက်နေရာတစ်နေရာရကိုမှန်ကန်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့သက်သေပြခဲ့သူ Simulator ကိုဖီဖာ 19. ကစားသမားအတွက် XX အဖွဲ့သည်တပတ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဘယ်သူသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိပ်တန်း 11 hit နှင့်ခုံတန်းရှည်ဖို့ဒီအချိန်သို့ သွား. အဘယျသို့နည်း
ထိပ်တန်းကစားသမား XX အဖွဲ့ဖီဖာ 19
ထိုရက်သတ္တပတ်၏အသင်းအတွက်ဂိုးသမား၏အနေအထားကိုဂိုးသမား Nice အာဂျင်တီးနား Walter ဟာဘင်နီတက်ဇ်ကြာပါသည်။ သူဟာပြင်သစ်၏တောင်ဘက်ကနေတိုက်စစ်အသင်းကနေပစ်မှတ်ပေါ်မှာခုနစ်ရိုက်ချက်များထင်ဟပ် Nima ဆန့်ကျင်အိမ်မှာဂိမ်း၏သူရဲကောင်းများတဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
တိုးတက်ကဒ် 84 rated နှင့်ညွှန်းကိန်းများနှင့်တုံ့ပြန်မှုဟာဂန္ထဝင်ကိုရွှေကဒ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထက်ပိုမို 10 ယူနစ်ထမြောက်တော်မူပြီအနေအထားကို select ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကိုဗဟိုကျောကစားသမားသုံးကလပ် Montpellier Ilton ၏ဘရာဇီးလ်ဝါရင့်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကပ္ပတိန် Kahn ကျော်ကသူ့ကလပ်များ၏အောင်ပွဲ၏အဓိကဖန်တီးသူတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ 41 နှစ်အရွယ် Ilton ပြိုင်ဘက်သာနှစ်ကြိမ်ဘင် Lecomte နေဖြင့်ရည်မှန်းချက်အပေါ်မှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ခွင့်ပြု, ကာကွယ်ရေး၏ဤခေါင်းဆောင်များကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဆိုပါကဒ်အသစ်ကာကွယ် 84 rated, ဒါပေမယ့်ကစားသမားမြန်နှုန်းနေဆဲအလွန်သေးငယ်သောကွောငျ့ဂိမ်းကစား, တနင်္ဂနွေရဲ့ဂိမ်း၏သူရဲကောင်းများအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် - လက်ရှိ Mete အတွက်လုံးဝပြ သ. မရပါဖြစ်သော 44 ယူနစ်။
ဟိုဆေးမာရီယာ Jimenez ၏မျက်နှာသာအတွက်ဒုတိယအ quarterback ကြယ်အဖွဲ့ကပြီးခဲ့သည့်အပတ်က။ 26 နှစ်အရွယ်ဥရုဂွေးပွင့်များနှင့်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်၏ကာကွယ်ရေးအတွက်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရ Diego မှ Godin အတူအားကောင်းပေါက်နေသည်။ Getafe အထောက်အထားဆန့်ကျင်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်။ ပစ်မှတ်အပေါ်နှစ်ခုသာရိုက်ချက်များဖို့ပြိုင်ဘက်ခွင့်ပြုဥရုဂွေးမြို့ရိုးကို။ ဟိုဆေးအားလုံးမြင်းစီးတိုက်ခိုက်ရေးအနိုင်ရခဲ့ခြင်းနှင့်တိကျဂီယာ၏ 84% ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဆိုပါကစားသမားရဲ့တိုးတက်မှုစာရင်းပေါ်ရှိအခြားကစားသမားများ၏ထိုအဖြစ်သိသာမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိအ card ကို 84 ကနေ 86 မှမပြောင်းလဲသာ2အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ယူနစ်, ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်အစီအစဉ်၏အသင်းအတွက်တတိယ quarterback kraok ဘာစီလိုနာနယ်လ်ဆင် Semedo ဆောင်ရွက်သည်။ လေ့လာသူကလပ်နေဆဲအဖွဲ့သည်မိမိကိုမိမိရှာဖွေနေသည်ကား, မိမိကြိုးစားအားထုတ်မှု Girona ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ကလပ်ကကူညီရန်လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဧည့်ဂိမ်း Catalan များအတွက်တကယ်ခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်ဂိမ်းသို့ Semedo 9, အသင်းပိုင်ရှင်တွေကချမှတ်သည့်တစ်ဦး stringy နှင့်ခက်ခဲတဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆော့ကစားရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သွင်းယူဂိုးကိုရရှိခဲ့သည်။
လက်ဝဲနံပါးဒေါ့မွန်ကနေရူးအလုပ်သမားရာဖေးလ် Guerreiro ထွက်မွေးမြူရေး။ အဆိုပါပေါ်တူဂီ 5-1 တစ်ရမှတ်နှင့်အတူ Hannover ၏ရှုံးနိမ့်အတွက်တိုက်ရိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။
Miyiko Albornoz အားဖြင့်ကာကွယ်ခဲ့သည့်လက်ဝဲတောင်ပံ, သူ 78 ဦးထဲကနေ 82 မှ4ယူနစ်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတိုးရရှိခဲ့ရာအဘို့, အပိုင်းပိုင်းကိုက်ဖြတ်, ထိုသို့ရှင်းလင်းကြောင်း Guerreiro အလုံအလောက်ဒါကြောင့်လည်းသူကသွင်းယူပေးခဲ့သည်။
ထိုရက်သတ္တပတ်၏လက်ရှိအသင်းအတွက်ပေါ်တူဂီတစ်နည်းနည်းများလွန်း ... ညာဘက် Lateral ဂျူဗင်တပ်စ်နှင့် compatriot စီရော်နယ်ဒိုဂျိုအာ Cancela အဖွဲ့ရောမလာဇီယိုကျော်အားကြီးသောဘုန်းတန်ခိုးကြီးအောင်ပွဲဆွဲထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါပေါ်တူဂီအစည်းအဝေး၏ 74th မိနစ်များတွင်သွင်းယူမိမိနှင့်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်း 88 တစ်ဦးပြစ်ဒဏ်ဝင်ငွေသည်ပင်နယ်တီပြိုင်ဘက်အတွက် fouled ။ ငါသင်တန်း၏, kryry ကြောင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်။
87 တစ် rating နှင့်အတူအသစ်ကဒ်ကိုချက်ချင်းကစားသမားထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည်အမြန်နှုန်း, dribbling နှင့်အရည်အသွေးအစီအစဉ်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်။
အဘယ်အရာကိုမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ခဲ့သည်, La လိဂ် Eibar တစ်ဦးကျိုးနွံအလယ်တန်းတောင်သူလယ်သမားများ၏အနေဖြင့်ရက်သတ္တပတ်၏အဖွဲ့စပိန်ဂျုံးယော်ဒန်မြစ်၌အသှငျအပွငျဖြစ်ခဲ့သည်။ Leganes ဗဟိုကွင်းလယ်လူဆန့်ကျင်နေတဲ့လည်စည်းပွဲစဉ်များတွင်တစ်ဦးကူညီပေးနေတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုယ်တော်တိုင်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပွငျ 'passes များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုနှုန်းကို 81% ထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကစားသမားအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါဘူး။
7 ယူနစ်အထိဂျော်ဒန်ကဒ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၌တည်၏။ , ကိုကူညီပေးနေပြီးရိုက်ပုတ် dribbling သိသိသာသာစိုက်ပျိုးညွှန်းကိန်း။
အမှုအတွက်အသင်းသီတင်းပတ်အတွင်းကစားကွက်ဖန်တီးရှင်များ၏အနေအထားကိုအဆိုပါတိုက်စစ်ကွင်းလယ်လူ Atalanta Alejandro ဂိုမက်ဇယူထားသော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်များ၏ထူးချွန်ဆုံးကစားသမားတစ်ဦးကဆိုအနေအထားကနေစူးရှလွှဲပြောင်းဘို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအကျွမ်းကျင်လိမ္မာဖြေရှင်းချက် Atalanta မြို့တော်ရိုးမားဆန့်ကျင်နေတဲ့ပွဲစဉ်ကစားရန်ခွင့်ပြုမထားပေ။ အဆိုပါအာဂျင်တီးနားနှစ်ခုကိုကူညီပေးနေသွင်းယူနှင့် 94% ဂိမ်းနှုန်းတိကျမှု 'passes အပ်ပေးတော်မူ၏။ အဆိုပါတိုက်စစ်ကစားသမားများအတွက် Fantastic ကိန်းဂဏန်း!
Alejandro3အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ယူနစ်ကြီးပြင်းနှင့်တိုက်စစ်ကွင်းလယ်လူအတွက်ဗဟို-ရှေ့ဆက်အတူဦးစားပေးအနေအထားကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုရက်သတ္တပတ်၏အဖွဲ့၏ newness အတွက်တိုက်ခိုက်မှု၏လက်ဝဲဘက်နံပါးတွင်တစ်ဦးအာဂျင်တီးနားပြေးသမားအိန်ဂျယ်ဒီမာရီယာဖြစ်ထွက်လှည့်။ PSG အသင်းတောင်ပံကစားသမား Rennes အနိုင်ယူကူညီပေးခဲ့သည်။ di မာရီယာတစ်ဦးရည်မှန်းချက်နှင့်အကူညီပေးနေသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
မိမိအကဒ်အသစ်စံကဒ်အထက်3ယူနစ်ဖြစ်သော, 87 rated ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာထိုရက်သတ္တပတ်၏အာဂျင်တီးနားအသင်း၏ဒုတိယ hit ဖြစ်ပါသည်: ကသူ၏ယခင်ကဒ် 86 ယူနစ်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှတ်သားခဲ့သည်။
ageless ဂိုးသွင်းတည်ရှိသောတိုက်ခိုက်မှု၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်စက် Sampdoria ထံမှကာကွယ်ရေး Fabio Quagliarella ဖျက်ဆီးဖို့။ 36 နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှုးရှေ့ဆက်စီရော်နယ်ဒိုနှင့် Duvan Zapata ၏, bombardirsky ပြိုင်ပွဲစီးရီးအေ၌ပထမဦးဆုံးလာပါတယ်။ 20 ဂိမ်းများကိုယခုရာသီအတွက် 16 ရည်မှန်းချက်များ! ငါနှစ်ဆများအတွက်တပတ် Fabio ၏ command ကိုခဲ့ပါတယ်နှင့်အူဒီးနီး crashing မြို့တံခါးဝ၌ကူညီ။
အားနည်းရှေ့ဆက်မြန်နှုန်းမရှိတော့ဒါကူကယ်ရာမဲ့ကြည့်နေစဉ် rating ကတ်များ,5မှတ်အားဖြင့်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
Karim က Benzema Real Madrid အသင်း၏နောက်ဆုံးနှစ်ခုအောင်ပွဲအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်ရည်မှန်းချက်များ Karim ကအဓိကတိုက်စစ်မှူးတော်ဝင်ကလပ်စဉ်းစားနှစ်ပေါင်းများစွာအချည်းနှီးမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ Copa del Rey အတွက်လာလီဂါနှင့် Girona ရည်မှန်းချက်အတွက်တံခါးဝ Espanyol နှစ်ခုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာပြင်သစ် 86 တစ် rating နှင့်အတူထိုရက်သတ္တပတ်၏ကစားသမားကဒ်ပေးဖို့ EA ၏ယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။
တရားမျှတမှုအတွက်, 87 တစ် rating နှင့်အတူအထူးကို item ၏အမျိုးအစားအနေဖြင့်ချန်ပီယံလိဂ်ကဒ်နေဆဲအေးမြသည်။
ဒါက Brescia တိုက်စစ်မှူး Alfredo Gianluigi Donnarumma အလားတူပစ္စည်းများနှင့်တကွ, ခုံတန်းရှည်တွင်ဖီဖာ 19 ခုနှစ် XX အဖွဲ့သည်တပတ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကို 84 ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောတိုက်စစ်မှူး RB Leipzig Yussuf Poulsen ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လှညျ့ 81 တစ် rating နှင့်အတူ Lateral Borussia Mönchengladbachအော်စကာ Wendt left ယျ။
အချို့ကတ်များအာရုံစူးစိုက်မှုကယ့်ကိုထိုက်တန်ကြောင့်ဒီတစ်ခါလည်းဒီလူတွေထဲကတစ်ခုပြီးသား, သင့်အဖွဲ့သည်အတွက်လေပြီတကား သို့သော်ဘောလုံးအသိုင်းအဝုိင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိပ်တန်းကစားသမားများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်တစ်ပတ်ဖီဖာ 19 အတွင်းအများဆုံးကံဆိုး၏တဦးတည်း၏ XX အဖွဲ့ဟုအမည်ပေးထားသည့်သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစစ်အမှန်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထင်ရှားရှိသည်ဟုသူမြား၏အဖွဲ့ကြောင်းမမေ့မလြော့ပါ။ တင်ပြဖွဲ့စည်းပုံမှာပင်အများဆုံးကြီးတွေ-အသင်းတော်များနှင့်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမဲလိုက်ခြင်းစီစဉ်သင့်ပါတယ်ဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါတတ်နိုင်သည်။